I-Gorgeous Ocean View Luxury 3BHK apt eduze nesikhumulo sezindiza
Sancoale, Goa, i-India
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Sushil
U-100% wezivakashi zakamuva unikeze u-Sushil izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Siyakwamukela ku-Water's Edge ukuze uthole umbono omuhle ongaphazamiseki wokuhlangana komfula i-Zuari noLwandle lwase-Arabia. Ikhaya lethu likanokusho lisendaweni enamasango futhi linikeza amakamelo okulala ama-3 abanzi, akhanyiswe yilanga ngokwemvelo. Ezimbili zazo zibheke echibini lokubhukuda kanti enye ibheke emkhathizwe oLwandle lwase-Arabia. Ovulandi abakhulu kuwo wonke amagumbi ukuze uhlale, uphumule futhi ubuke imvelo. Isidleke sihlonyiswe ngazo zonke izinsiza zesimanje ukwenza ukuhlala kwakho kunethezekile njengoba unqekuzisa ngokoqobo ethangeni lolwandle.
Ibekwe endaweni ekahle cishe amakhilomitha amathathu ukusuka e-Dabolim International Airport edolobheni eliyitheku laseVasco-da-Gama. Indawo imaphakathi neGoa neBogamalo beach 6 kms, Velsao beach 8 kms, Panaji city approx 30 mins drive, Colva beach approx 35 mins drive. Isiteshi sikaloliwe iVasco-Da-Gama siqhele ngamakhilomitha angu-7.
Leli fulethi elibekwe ethambekeni elinombono omuhle wolwandle, linamagumbi okulala amathathu abanzi ane-air conditioning, ngalinye linombhede olingana nendlovukazi. Igumbi lokuhlala elibanzi lihlotshiswe kahle ukuze lihlangane ngaphandle komthungo nolwandle ngaphandle. Inekhishi elifakwe kahle nendawo yokudlela enkulu. Ikhishi linazo zonke izinto ezisetshenziswayo ukuze kuphekwe isidlo sasekuseni nokudla okufanele. Ifakwe iMicrowave, Induction Stove, Fridge, Kettle kagesi kanye ne-Aquaguard RO yokuhlanza amanzi.
Kuyinkimbinkimbi enamasango enokuphepha okungu-24/7, amandla asekela isipele, amanzi ashisayo/abandayo eshaweni nesitsha sokuwasha, umshini wokuwasha, i-Smart LED TV enoxhumo lwe-Amazon Prime, i-Fibre-optic band broad band uxhumano lwe-WI-Fi.
Ngesikhathi sokuhlala kwakho uzokwazi ukungena kulo lonke ifulethi, indawo yokupaka eyodwa kanye nedamu lokubhukuda. Kuyisibopho sayo ukuba nezingubo zokubhukuda ezifanele ngaphambi kokungena echibini.
Ezinye izinto okufanele uziqaphele
Izivakashi Zasekhaya - Ikhophi yekhadi likamazisi eligunyazwe nguHulumeni
Izivakashi Zamazwe Ngamazwe - Ikhophi Yepasipoti kanye nekhasi le-visa
-Noma imuphi umonakalo wesakhiwo, izinsiza, izinto zikagesi njll zizotholwa kubavakashi.
-Sicela usebenzise izikhwama zikadoti kanye nemigqomo ukuze ulahle udoti.
-Izinto ezisetshenziswayo, abalandeli, i-Ac, Izibani njll kufanele zicishwe ngenkathi ziphuma endaweni.
-Sicela ubambisane nonogada esangweni, kanye nabasebenzi bethu njengoba bekhona ukuze bakugcine uphephile futhi unethezekile.
-Ukubhema kuvunyelwe kuma-balcony noma ezindaweni ezivulekile kuphela hhayi ngaphakathi kwamakamelo.
-Azikho izivakashi ezizovunyelwa ukungena kule ndawo futhi yizivakashi eziqokiwe kuphela ezizovunyelwa.
-Ngesaziso kusengaphambili, izinto zokuhamba zingahlelwa ngezindleko ezengeziwe.
4.64 ·14 okushiwo abanye
4.64 · 14 okushiwo abanye
Kukhona izindawo zokudlela eziseduze ezihlinzeka ngokudiliva ekhaya. Amalungu okudla afana ne-Wildwood Pizza-Studio & Rotisserie, i-Dominos Pizza, i-Punjabi Dhaba aseduze. Izivakashi zingaya olwandle lapho kuno-cha. imijondolo enikela ngezinhlobonhlobo zokudla. Izitolo ezinkulu ezifana neVishal Megamart, izitolo ezilula ziyatholakala ezindaweni eziseduze.
Ngizotholakala ukuze ngamukele izihambeli lapho zifika nangaso sonke isikhathi sokuhlala kwazo
Hlola ezinye izinketho ezise- Sancoale namaphethelo